Amathiphu Wokwakhiwa 9 Wokuthatha Izithombe Ezingakholeki | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoJuni 30, i-2015 NgoLwesibili, ngoJuni 30, i-2015 Douglas Karr
Lokhu kungaba elinye lamaqoqo amahle kakhulu wezeluleko zokuthwebula izithombe engake ngazithola ku-inthanethi. Uma kukhulunywa iqiniso, ngingumthwebuli wezithombe owesabekayo. Lokho akusho ukuthi anginakho ukuthanda okuhle. Ngihlala ngimangazwa ubuciko obumangalisayo obukhiqizwa ngomngane wethu UPaul D'Andrea - umthwebuli wezithombe owaziwayo nomngani omuhle lapha e-Indianapolis. Simbiza ukuthi asenzele imisebenzi eminingi yamakhasimende ngoba siyadelela ukusebenzisa izithombe zesitoko kumasayithi ezinkampani.
Kuvidiyo yabo yakamuva, I-COOPH unikeza Amathiphu Wokwakhiwa ayi-9 wezithombe eziwina imiklomelo. Kungenze ngacabanga kabusha ngokuthatha izithombe ngoba njengoba nje nomthwebuli wezithombe esebenza ngendaba yakhe, kuyacaca ukuthi umculi naye ucabanga ngabalaleli bakhe njengoba bethatha isithombe sabo.
9 Amathiphu Wokwakhiwa
Umbuso Wezintathu - Beka amaphuzu athakazelisayo ezimpambanweni zemigwaqo lapho indawo isikiwe yaba izingxenye ezintathu kwezintathu zibheke phezulu nendawo evundlile. Beka izinto ezibalulekile emigqeni.
Imigqa Eholayo - Sebenzisa imigqa yemvelo ukuhola iso esithombeni.
Ama-diagonals - Imigqa edayagonal idala ukunyakaza okukhulu.
Ukufulema - Sebenzisa ozimele bemvelo njengamawindi nezicabha.
Figure kuya Ground - Thola umehluko phakathi kwesihloko nesizinda.
Gcwalisa ifreyimu - Sondela kwizifundo zakho.
Isikhungo Esivelele - Beka iso elibusayo maphakathi nesithombe ukuze unikeze umbono wokuthi iso liyakulandela.
Amaphethini nokuphindaphinda - Amaphethini ajabulisa ubuhle, kepha okuhle kakhulu lapho iphethini iphazanyiswa.
wesimethri - I-symmetry iyajabulisa iso.
Mhlawumbe iseluleko esihle kakhulu esinikezwe uSteve McCurry ukuthi imithetho yenzelwe ukuthi yephulwe futhi uthole isitayela sakho.
Qaphela: Asinayo imvume yokwabelana ngezithombe - ngakho-ke qiniseka ukuthi ukwenzile chofoza kulokhu okuthunyelwe ukubuka ividiyo uma ungayiboni ngaphezulu. Ngingakukhuthaza ukuthi nawe uvakashele Igalari kaSteve McCurry eku-inthanethi futhi uthathe umsebenzi omangalisayo awukhiqizayo eminyakeni edlule.
Tags: iso eliphambiliukubunjwaigumbiama-diagonalukuthola phansigcwalisa ifreyimuukuhlelaimigqa ehamba phambiliamaphethini nokuphindaphindaIsithombeamathiphu wezithombeUkubusa of kwezintathuUSteve McCurrywesimethri
UJun 7, 2016 ngo-12: 39 AM
Douglas Karr kufanele isebenze ngokubambisana noSteve McCurry